Awofo, Monyɛ Nea Mubetumi Biara Mmoa Mo Mma Na Ensi Wɔn Yiye
Awofo a wosuro Onyankopɔn ani gye ho pa ara sɛ wobehu sɛ wɔn mma abɛyɛ Yehowa asomfo a wodi nokware. Sɛ awofo de Bible nkyerɛkyerɛ dua wɔn mma komam wɔ wɔn mmofraase pɛɛ a, wobetumi aboa wɔn ama wɔayɛ saa. (De 6:7; Mme 22:6) Wohwɛ a, ebehia sɛ awofo de nneɛma bɔ afɔre na wɔatumi ayɛ wei? Yiw, ehia pa ara! Mfaso a ɛwɔ so nti, ɛsɛ sɛ wɔbɔ mmɔden yɛ saa.—3Yo 4.
Awofo betumi asua pii afi Yosef ne Maria hɔ. Ná wɔde ayɛ wɔn su sɛ ‘afe biara wɔbɛkɔ Yerusalem akodi Twam afahyɛ no.’ Ɛwom sɛ na wei gye adwumaden ne sika de, nanso na wɔbɔ mmɔden kɔ. (Lu 2:41) Ɛda adi sɛ wɔde Yehowa som dii kan wɔ wɔn abusua no mu. Saa ara nso na ɛnnɛ, sɛ awofo de hokwan a wobenya biara kyerɛkyerɛ wɔn mma na wɔyɛ nhwɛso pa ma wɔn a, wobetumi aboa wɔn ama wɔafa ɔkwan pa so.—Dw 127:3-5.
Ɛwom sɛ ofie a wɔtetee Yesu nuanom wom no, na wɔsom Onyankopɔn, nanso Yesu nuanom no annye no anni kosii ne wu akyi. (Yoh 7:5; Aso 1:14) Akyiri yi, ne nuanom mmienu, Yakobo ne Yuda kyerɛw Bible mu nhoma a wɔn din da so no.
HWƐ VIDEO A YƐATO DIN WƆAMPO HOKWAN BIARA, NA BUA NSƐMMISA A EDIDI SO YI:
Bere a Jon ne Sharon Schiller rekyekye wɔn abusua no, ɔkwan bɛn so na wɔde Ahenni nneɛma dii kan?
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ awofo hwɛ sɛnea wɔn mma no mu biara te na ama wɔahu nteɛso a ɛfata no?
Ɔkwan bɛn so na awofo betumi aboa wɔn mma, na sɛ wohyia wɔn gyidi ho sɔhwɛ a, wɔatumi agyina ano?
Nnwinnade ahorow a Yehowa ahyehyɛde no ayɛ no, emu nea ɛwɔ he na wode aboa wo mma ama wɔne Yehowa adamfofa mu ayɛ den?
Fa Yehowa som di kan wɔ w’abusua mu